Musa I (1280 –1337), kana Mansa Musa, aive Mansa we Umambo hwe Mali wechipfumbamwe, aive weUmambo hweMali, iyo yaive imwe muvuso weVaiziramu weku Madokero eAfurika yakasimba.
Munguva ye kutumbudzuka kwaMusa padendemaro, Mali pakukura kwayo yaisanganisa dunhu reUmambo hweGhana yemushure yakakundwa neMali. Umambo hweMali yaisanganisa chikamu che Ghini, Senegaru, Moriteniya, Gambiya uye muvuso weMari yanhasi.
Musa akaenda kuhajj kuMekha muna 1324, uye akafamba ne entourage huru ne ndarama zhinji. Panzira yake, akagara mu Kairo, ndiko kwaakapa zvipo zvakanakakwazvo zvikaita kuti kudhura kwe ndarama kuite kakudzika pa mwakawechikumi wakateera uye akatora attention munyika ye Mamuzirimu.
Zita raMansa Musa rainzi Musa (Chiarabhu: موسى‎, chiroma: Mūsā), zita rake irimwe mhando rezita rekuti Mhoze muChiarabhu. Mansa, zvinoreva kuti 'mutongi' kana 'mambo' mu Chimande, raive dumidzo revatongi weUmambo hweMali. Rakambopindurwa richinzi "mukundi" uye "mambo-priest". Munhoroondo yekureketwa uye muViringira reTimbuktu (kana Makeronika eTimbuktu), Musa aizivikwa achinzi Kanku Musa. Muchinyakare cheVamande, vanowanzo isa zita ra amai vemunhu sechivakashure pazita rake, saka zita rekuti Kanku Musa rinoreva kuti "Musa, mwanakomana waKanku", asi hazvizivikwi kuti jinioroji iyi yaive chaiyo here. Anonzi wo Hidji Mansa Musa muchinyakare chekuhwereketwa mumareferenzi kuhajj rake. Se membha we Ushe hwe Keita, anombo danwa achinzi Musa Keita.
Mumutauro we Chisonghai, mutongi we Mali senge Musa waizivikwa sa Mali-koi, koi zvichireva dumidzo rekuratidza mukondo pamusoro pe nzvimbo: mumamwe mazwi, "mutongi we Mali".
MuChishona zita rekuti Mansa Musa rinenge richinzi Mambo Mhoze kana Mutongi Mhoze.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mansa_Musa&oldid=93809"
This page was last edited on 21 Kubvumbi 2022, at 17:05.